भूकम्पपीडित निजी आवास अनुदान : तेस्राे किस्ता पाउने लाभग्राही न्यून- गण्डकी - कान्तिपुर समाचार
भूकम्पपीडित निजी आवास अनुदान : तेस्राे किस्ता पाउने लाभग्राही न्यून
कास्कीमा ६ हजार २६ जना लाभग्राहीमध्ये १ सय ७४ जनाले लिए अन्तिम किस्ता
फाल्गुन २०, २०७५ लालप्रसाद शर्मा
पोखरा — कास्कीमा निकै कम मात्रामा भूकम्पपीडितले तेस्रो किस्ताको निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदानको रकम लगेका छन् । भूकम्पले घर पूर्ण क्षति भएर ३ लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने ६ हजार २६ लाभग्राही भए पनि अहिलेसम्म जम्मा १ सय ७४ ले मात्रै अन्तिम निकासा लगेको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइले जनाएको छ ।
कास्कीको रूपा गाउँपालिकामा भूकम्पपछि निजी आवास पुननिर्माण अनुदानबाट घर बनाएका लाभग्राहीलाई घर निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र वितरण गरिएपछि सामूहिक तस्बिर खिचाउँदै ।तस्बिर : कान्तिपुर
४६ जना लाभग्राहीको अन्तिम किस्ता निकासाका लागि कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा फाइल गए पनि पैसा भने लगेका छैनन् ।
पीडितको तथ्यांक संकलनमा ढिलाइ, पुनर्निर्माण प्राधिकरणले समयमै प्राविधि नखटाएको, कतिपयले घर बनाए पनि मापदण्ड पूरा नगरेको जस्ता कारणले तेस्रो किस्ताको रकम निकासा हुन नसकेको कम लाभग्राहीले अन्तिम निकासा लैजान नपाएको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइका फोकल पर्सन अर्जुन नेउपानेले बताए ।
‘कतिपय घर निर्माण सम्पन्न हुँदैछन्’ उनले भने, ‘जुन गतिमा घर बन्नुपर्थ्यो बन्न सकेका छैनन् ।’ लाभग्राहीमध्ये ५ हजार ६ सय ४ जनाले पहिलो किस्ता मात्रै लगेका छन । त्यसैगरी २ हजार १ सय ४४ ले दोस्रो किस्ता लगेका नेउपानेले बताए । घर आंशिक क्षति भएर एक लाख रुपैयाँ अनुदान (प्रवलीकरण लाभग्राही) पाउने २ सय ४२ जना रहेकामा त्यसको आधाले अर्थात् १ सय २१ जनाले पहिलो किस्ता लगेका छन् । अझै पनि आफ्नो घर भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएको भन्दै ३ हजार ३ सय ८८ जनाले गुनासो दर्ता गराएको नेउपानेले बताए ।
भूकम्पबाट कम प्रभावित १७ जिल्लामध्ये कास्की एक हो । कम प्रभावित जिल्लाका लाभग्राहीलाई अनुदान दिने सुरुवात यहींबाट भएको थियो । महानगर र ४ वटा गाउँपालिकामा अहिले ८७ प्राविधिक खटिएका छन् । जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ भवनका निमित्त प्रमुख उमेशकुमार चौधरीले २०७४ पुसबाट मात्र प्राविधिक खटाइएको बताए । त्यसअघि थुप्रै पीडितले आफूखुसी घर बनाएकाले मापदण्डविपरीत भएर अनुदान रकम रोकिएको उनको भनाइ छ ।
‘एक त प्राविधिकहरू ढिलो खटाइयो’ उनले भने, ‘त्यसअघि नै बनेका घर प्राविधिक हिसाबले अनुपयुक्त भएपछि अनुदान दिन नमिलेर अन्तिम किस्ता कम गएको हो ।’ दोस्रो किस्ता पुस मसान्तभित्र लैजान भनिए पनि चालु आवको अन्तिमसम्ममा म्याद बढाइएको छ । कास्कीमा विभिन्न १२ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विभिन्न शाखाहरूबाट अनुदान भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
महानगर र ४ गाउँपालिकामध्ये रूपा गाउँपालिकामा घर पुनर्निर्माण कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएको छ । उक्त गाउँपालिकाका अधिकांश घर बनेका छन । भूकम्प अनुदानबाट १ सय १५ घर बनेपछि गाउँपालिकाले घर निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र वितरण गरेको छ । रूपामा १ सय २१ ले घर बनाइसकेका छन् ।
गाउँपालिकामा १ हजार १ सय ९४ ले पहिलो किस्ता र ४ सय २५ जनाले दोस्रो किस्ता लगेका छन् । गाउँपालिका अध्यक्ष नवराज ओझाले घर बनाउन सरकारले दिएको ३ लाखले नपुगे पनि सुरक्षित बनाउनुपर्छ भन्ने चेतनाका कारण ऋण काढेरै पीडितले घर बनाएको बताए । सरकारले भूकम्पपीडितलाई सस्तो ब्याजमा ऋणको व्यवस्थासमेत गरेको छ ।
निजी आवासबाहेक कास्कीमा प्राधिकरणमार्फत दुईवटा सडक र विभिन्न विद्यालय पनि बनिरहेका छन् । हेम्जा खानेपानी मुहान–लुम्रे–सिदिङ र शिशुवा–पोल्याङटार सडक अहिले बनिरेहका छन् । हेम्जाको मेलबोटबाट सुरु हुने १५ दशमलव ९ किलोमिटर लम्बाइको हेम्जा खानेपानी मुहान–लुम्रे–सिदिङ सडक २६ करोड १ लाख ९७ हजार २ सय ३९ रुपैयाँमा सम्झौता भएर निर्माणाधीन छ ।
यसैगरी १६ दशमलव २ किलोमिटर लामो शिशुवा–पोल्याङटार सडक २१ करोड ३२ लाख ९९ हजार ५ सय ५० रुपैयाँमा सम्झौता भएर बनिरहेको छ । दुवै सडकको १३ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । त्यस्तै विद्यालयतर्फ ४ कोठे आरसीसी भवनअन्तर्गत १६, ३ कोठे ट्रसअन्तर्गत ४ र २ कोठे ट्रसअन्तर्गत १४ भवन पनि निर्माण भइरहेको नेउपानेले बताए ।
प्रकाशित : फाल्गुन २०, २०७५ १०:३८
'पार्टीमा संक्रमणकाल लम्बिए समस्या’
फाल्गुन २०, २०७५ कान्तिपुर संवाददाता
लमजुङ — एकीकरणपछि आकार ठूलो भएको नेकपामा पार्टीभिक्रको संत्रमणकाल लम्बिँदै जाँदा अनेक ठाउँबाट प्रहार हुने गरेको गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बताएका छन् ।
नेकपा लमजुङले बेंसीसहरमा आयोजना गरेको शोकसभामा बोल्दै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ । तस्बिर : आश गुरुङ/कान्तिपुर
प्रदेशको पार्टी इन्चार्जसमेत रहेका उनले पार्टी एक भएर मात्रै नहुने भन्दै सबै सदस्यको भावना, वैचारिक, सैद्धान्तिक, व्यावहारिक र कार्यनीति एक हुनुपर्ने बताए । उनले संक्रमणकालको अन्त्य चाँडै गरिनुपर्ने बताए । ‘नगर, गाउँ तथा वडा साथै वडा जनवर्गीय संगठन एक बनाउन कसले छेकेको छ ? यस्तो कुरामा किन ढिलाइ ?’ पूर्वअर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारी र पर्यटन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको शोकसभा कार्यक्रमलाई आइतबार बेंसीसहरमा सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘एकता गर्न जति ढिलाइ हुन्छ, त्यति नै समस्या पार्टी र सरकार सञ्चालनमा पर्न जान्छ ।’ जिल्ला संगठन एक बनाउन अध्यक्षद्वयले चासो लिनुपर्ने उनले उल्लेख गरे ।
‘एउटै देशमा २ प्रधानमन्त्री भएको इतिहास छ । कम्युनिष्ट पार्टीमा २ अध्यक्ष ? यो हुन्छ । तर, आन्तरिक संक्रमकाल जति लम्बिँदै गयो, उति नै पार्टी र सरकारलाई समस्या पर्छ ।’ गाउँगाउँमा पार्टी एक नभएकाले कार्यकर्ता लाखापाखा लाग्न थालेको संकेत गर्दै उनले भने, ‘हामी संक्रमणकालमा छौं । यसलाई जसरी पनि परास्त गर्नुपर्छ ।’ जिल्ला संयन्त्रका तर्फबाट गरिनुपर्ने कामहरू नभएको भन्दै उनले कार्यक्रम, सम्पत्ति एकीकरण, जनवर्गीय संगठन एकीकरण, सदस्यता अद्यावधिकजस्ता काम छिटो गर्ने निर्देशन दिए ।
कम्युनिष्टले चाहेको ‘सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल’ को जग भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री हुँदा तत्कालीन एमाले नेतृत्वको सरकारले सुरुवात गरेको उनले दाबी गरे । जनसम्पर्कमा अब्बल पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले विकासमा नयाँ मोडल देखाउन चाहे पनि पूरा हुन नसकेको बताए । ‘दुवै नेता सरल, सरस र मिजासिला हुनुहुन्थ्यो । दुवैको चाहना जनता सुखी हुन् भन्ने थियो’ उनले भने, ‘मृत्यु कसैले नकार्न सकिँदैन । तर, सुखी जनता देख्न नपाउँदै दुवै नेता जानुभो । यो हाम्रो लागि अपूरणीय क्षति हो ।’
दुवै नेतालाई सिध्याउन कांग्रेस लागिपरेको समेत आरोप उनले लगाए । ‘५१ सालमा सामाजिक सुरक्षाभत्ता सुरु गरेदेखि भरतमोहन सिध्याउन कांग्रेस लागे । अहिले रवीन्द्र सिध्याउन लागे । जसले राम्रो काम गर्छ, उसलाई सिध्याउन खोज्ने काम कांग्रेसबाट हुन्छ’ उनले भने । कम्युनिष्ट भनेको मजदुर हो, कोट लाउन कहाँ पाइन्छ ? भन्ने तल्लोस्तरको भनाइ कांग्रेसबाट आएको उनले बताए । ‘पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कोट लगाउन पाइँदैन भनेर कहीं लेखेको छ र ? हो हामी मजदुरका पार्टी हौं । मजदुरको दिन कहिल्यै नफिर्ने ?’ उनले भने, ‘समयअनुसार हामी परिवर्तन हुन्छौं, परिवर्तन हुन आवश्यक छ ।’
नेकपा गण्डकी प्रदेश प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारीले देशलाई समृद्ध बनाउनतर्फ लागे मात्रै नेता अधिकारीद्वयको सञ्चा श्रद्धाञ्जली हुने बताए । गण्डकी प्रदेश समिति सदस्य पारसमणि पौडेलले कम्युनिष्ट र कम्युनिष्टले मात्रै जनताका समस्या बुझ्ने र आवश्यकता पूरा गर्ने भन्दै कसैको नकरात्मक टिप्पणीमा नलाग्न सुझाव दिए । ‘जो बलियो छ, जो शक्तिशाली छ । उसलाई ढलाउन खोज्छ । हामी चनाखो हुनुपर्छ ।’
प्रकाशित : फाल्गुन २०, २०७५ १०:३६